लामो अवधिपछि नेपाली जनताले आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधी छनौट गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। २०५४ सालको स्थानीय चुनावपछि गठन भएका स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधीले आप्mनो स्थान विषेश आवश्यक स्थानीय विकासका कुराहरु सोचेका र थालेका हुन्। त्यस अवधिमा केही महत्वपूर्ण काम जस्तो गाउँगाउँमा बाटाहरु खन्ने, कलबर्ट, पुल पुलेसाहरु निर्माण गर्ने, गा.वि.स. र नगरपालिकाका कार्यालय बनाउने, विद्यालय खोल्ने कामहरु भएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। जनप्रतिनिधिहरुको अवधि समाप्त भएपछि कर्मचारीको शासन सुरु भयो। कर्मचारीको उद्देश्य र प्रवृत्ति भनेकै जागिर खाने र पैसा कमाउने हो। देशकै कर्मचारीको उच्च पदमा पुगेका व्यक्ति मुख्यसचिव जस्तो पद प्राप्त गरेको व्यक्ति त पद त भै हाल्यो पैसा पनि कमाउनु प¥यो भनेर विदेश हिँड्ने अवस्था छ भने त्यसभन्दा तलका कर्मचारीको हालत के होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब सबै कर्मचारी पैसाकै लागि काम लाग्दछन् भन्ने होइन। केही इमान्दार समाजको सुधारको लागि व्यक्तिगत इच्छा समेत मार्न सक्ने कर्मचारी पनि छन्। प्रणाली नबसेको अवस्थामा राम्रो अनुकुल स्थान पाउनको लागि भनसुन र चाकारी गर्ने, नैतिकता विरुद्धका कार्य गरेर पैसा कमाउने र त्यही पैसा खर्च गरेर फेरि राम्रा भनिने स्थानमा सरुवा हुने, केही गर्न चाहने कर्मचारी पनि स्थान विशेषका समस्या र समाधनका उपाय बुभ्mन नपाउदै अर्को स्थानमा सरुवा हुने, पहुँच नभएका र इमान्दर र स्वाभिमानी कर्मचारीले विकास निर्माणमा भूमिका हुने कार्यालय वा पद नपाउने कारणले पनि कर्मचारीबाट विकास निर्माण सम्भव थिएन। गर्न चाहने कर्मचारीले पनि जन प्रतिनिधिको अभावमा चुनौतिपूर्ण कार्य गर्न सम्भव भएन। धेरै गाविसले लामो अवधिसम्म गाविस सचिव समेत पाएनन्। एकै गाविस सचिवले दुई तीनवटा गाउँ विकास समतिको जिम्मा लिनु पर्ने बाध्यता पनि भयो। भएका गाविस सचिव पनि धेरै आप्mनो गाउँ विकास समितिको क्षेत्रमा भन्दा सदरमुकाममा बसे। जिल्ला सदरमुकाममा रहको जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समतिको नजिकमा डेरा संयुक्त डेरामा बस्ने वा सम्पर्क कार्यालय खोली नागरिकताको लागि र अन्य सरकारी कामको लागि सिफारिस गर्ने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा हुने मासिक बैठकमा उपस्थित हुने गरेको पनि देखियो। विकटमा गाउँ विकास समितिलाई छुट्टाएको बजेट लिने र उक्त गाउँ विकास समितिका केही टाठाबाठासँग भागबण्डा गरेर रकम खर्च गर्ने गरेको पनि पाइयो। विकासको लागि छुट्टाएको दुई चार प्रतिशत पनि सम्बन्धित कार्यमा खर्च नभएको पनि पाइयो। जनता प्रति उत्तरदायी, वचनवद्ध जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणका कार्य हुन पाएनन् विकास हुने सम्भावना नै रहेन।केन्द्रबाट दिइएका बजेट केन्द्रमुखी नै भए। विकास निर्माणका योजना छनौट गर्दा पनि के कस्तो विकासको योजना तथा कार्यक्रमले आप्mनो राजनीतिलाई फाइदा पुग्दछ भन्ने किसिमबाट सोचियो। अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरु योजनामा मात्र सीमित भए। स्थानीय दुरदर्शी नेतृत्व विकास हुन पाएन। दलका स्थानीय कार्यकता पनि केन्द्रमुखी नै भए। गाउँ ठाउँमा जनताको मन जित्न, स्थानीय समस्या समाधान गर्न लाग्नुको सट्टामा केन्द्रमा धाउने केन्द्रका नेताको वरिपरी घुम्ने, आफ्नो दलको सरकार हुँदा सिंहदरवार वरिपरी घुम्ने प्रवृत्ति बढ्यो। जनताको विश्वास लिन नपर्ने भएपछि स्थानीय समुदायसँग भिज्नु पर्ने, स्थानीय जनताका स्थानीय समस्या समाधन गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने पनि भएन। अब लामो अवधि स्थानीय स्तरमा जन प्रतिनिधि नपाएको अवस्थामा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको आफंैमा निकै महत्व छ। यो निर्वाचन २०७२ मा आएको नेपालको संविधान पछिको पहिलो निर्वाचन हो। संविधानले गरेको स्थानीय सरकारको पहिलो पटक निर्माण हुँदैछ। यस निर्वाचनले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारको जग बसाउने कार्य गर्ने छन्। यस निर्वाचन पछिको अवधिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, नीति, ऐन नियम निर्माण गर्ने, स्थानीय निकायको नामाकरणमा संशोधन गर्ने, करलगाउने जस्ता निर्णयहरु गर्ने छन्। यो नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्ने अवसर पनि हो। संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय तहका अधिकारको प्रयोग गर्ने कार्य पनि यसै निर्वाचनबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधीले गर्नेछन्। स्थानीय तहको यो निर्वाचन संघीय व्यवस्थापिका तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ। यसै निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य हुने छन् भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि मतदाता समेत हुने छन्। यस निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इमान्दारिता, लगनशीलता र क्षमताले सम्बन्धित स्थानीय तहको मात्र होइन देशकै विकासमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। अबको समयमा स्थानीय सरकारबीचमा धेरै विविधता हुन पनि सक्नेछ। स्थानीय सरकार सक्षम भएमा छिटै आप्mनो क्षेत्रलाई अन्य स्थानभन्दा विकास निर्माणमा अगाडि लैजान सक्ने सम्भावना छ भने कमजोर स्थानीय सरकार भएमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्यभन्दा पछाडि पर्ने छ। अबको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको विकास निर्वाचितहुने जनप्रतिनिधिको क्षमता दक्षता र इमान्दारितामा भर पर्नेछ। अतः आउँदै गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मतदाताले दलगत स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर स्थानीय समस्या बुझेको, सबैको साझा हुन सक्ने, दुरदृष्टि भएको, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा समुदायको स्वार्थका लागि लाग्ने इमान्दार नेता छान्नु पर्ने हुन्छ। दलहरुले पनि देशको विकास गर्न चाहेका हुन् भने गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर इमान्दार, दुरदृष्टि भएको, सक्षम कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा उमेदवार बनउनु पर्नेछ। भनसुन, चाकडीमा धाएको, आप्mनो गुटको नजिक भएको, आप्mनो नातापाता भित्र पर्ने, चुनावमा बढी रकम खर्च गर्न सक्ने जस्ता आधारमा भन्दा पनि को कति इमान्दार छ, समाजको लागि खट्न सक्दछ र कसले समुदाय परिचालन गर्न सक्दछ र स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्षम छ त्यस्ता कार्यकर्तालाई टिकट दिनु आवश्यक हुनेछ। स्थानीय तहमा सक्षम र इमान्दार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएमा गाउँ गाउँबाट र नगर नगरबाट विकासको लहर आउने छ, स्थानीय तह बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ र पाँच वर्षमा पनि देशले विकासमा फड्को मार्न सफल हुनेछ।
बुधबार, चैत्र ३०, २०७३ ११:०९:४६